Soo-saareyaasha Dhalada Beer-biyoodka & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Dhalada Beer Shiinaha
Dhalo biir madhan amber qaab
Waxaan sida caadiga ah ku qancin doonaa dukaameeyaasheena la ixtiraamo tayadayada sare, qiimaha iibka cajiibka ah iyo shirkad wanaagsan sababtoo ah waxaan nahay khabiir aad u badan oo aad u dadaal badan oo aan ku sameyno qaab qiimo jaban oo loogu talagalay Naqshadeynta Cusub ee Shiinaha 250ml 330ml Dhalada 500ml Beer Amber Beer Glass with Caps Caps, Qof kasta oo xiisaynaya ku dhowaad mid ka mid ah xalalkeena ama doonaya inuu ka hadlo iibsi caado ah, hubi inaad dareento lacag la'aan inaad nala soo xiriirto. Naqshad Casri ah oo loogu talagalay Shiinaha Dhalada Catarka iyo qiimaha Dhalada Beer, Maanta, waxaan macaamiil ka helnay adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan USA, Russia, Spain, Italy, Singapore, Malaysia, Thailand, Poland, Iran iyo Iraq. Hadafka shirkadeena waa in aan soo bandhigno alaabada tayada ugu sareysa leh qiimaha ugu fiican. Waxaan sugeynay inaan ganacsi kula yeelano!
275ml dhalada dhalada ah ee cabitaanka sharaabka ah ee cabitaanka kaarboon kaarboonta ah
Waxaan heysanaa shaqaale si hufan oo hufan ula macaamilaya weydiimaha macaamiisha. Ujeeddadeenu waa "100% qanacsanaanta iibsadaha sheykeena oo tayo sare leh, iibinta qiimaha & adeega shaqaalaheena" waana ku qanacsanahay caan soo jiidashada macaamiisha dhexdeeda. Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan ku hubinno xiriirrada ganacsi ee guuleysta adiga iyo adiga. Waxaan sidoo kale la leenahay iskaashi xasiloon dhowr shirkado ganacsi oo caalami ah. Waxay nala dhigayaan amar iyo dhoofinta badeecadaha iyo xalalka dalal kale. Waxaan rajeyneynaa inaan kula shaqeyno si aan u horumarinno suuq ballaaran.
Dhalada dhalada ah ee cabitaanka biirka cad
Liiska Liistada loogu talagalay Weelasha, Dhalada Dhalada. Mustaqbalka, waxaan ballanqaadeynaa inaan sii wadno soo bandhigida tayada sare iyo waxtarka waxtarka badan iyo xalalka, waxtarka waxtarka leh ka dib adeegga iibka ee dhammaan macaamiisheena adduunka oo dhan horumarka guud iyo faa'iidada sare.
330ml 500ml Matte Black Dhalooyinka Qaboojiyey Glass Beer Iyadoo Cap Birta Birta
Tayo-bilow tayo sare leh, iyo kan ugu sarreeya iibsaduhu waa tilmaamkeena si aan ugu fidino kaalmada ugu fiican dukaamadeena Waxaan nahay soo saare waxaanan leenahay agab tira badan si aan u fulino baahida macaamiisheena. Sannadahaan dhexdooda, waxaan ugu adeegnaa macaamiisheenna si daacadnimo ah tayo ahaan ugu horreyn, sharaf wax ku ool ah, gaarsiinta waqtiga, taas oo kasbatay sumcad wanaagsan. Waxaan rajeynayaa inaan kula shaqeeyo hadda!
Dhalada biir galaas warshad
Waxaan ka dhigi doonnaa shaqo kasta oo adag inay ahaato mid heer sare ah oo ku habboon, waxaanna dardargelin doonnaa qaababkeenna istaagga inta lagu guda jiro darajada shirkadaha heerka-sare iyo shirkadaha farsamada sare. Qiima dhimista dhalada galaaska sharaabka leh ee jumlada ah waxay leeyihiin 250ml 375ml 750ml macaamiisha. Dhalada Whiskey ee dhalada ah ayaa la socon kara Lid, waxaan sugeynay inaan si dhaqso leh u helno weydiimahaaga. Alaabooyinkayagu waxay si buuxda ula jaanqaadayaan sida ugu adag ee tilmaamaha caalamiga ah waxayna dhammayn karaan midkaaga - joojinta dukaamaysiga.
Dhalada biraha dhalada ah ee biraha aan cufan laheyn
Si ugu wanaagsan ee loo daboolo baahiyaha macmiilka, dhammaan howlahayaga waxaa si adag loogu fuliyaa iyada oo la raacayo halheyskeenna "Tayo Sare, Qiime Tartan, Adeeg Degdeg ah" dhammaan muraayadaha macmiilka. Haddii ay suurtagal tahay, fadlan noo soo dir shuruudahaaga oo leh liis faahfaahsan oo ay ku jiraan macluumaadka faahfaahinta iyo tirada aad u baahan tahay. Waxaan kuu soo diri doonnaa qiimaheena ugufiican dhiskaaga.
Dhalada jumlada ah ee ugu caansan cabitaanka dhalada ah ee dhalada ah
Waxaan ku sii wadaynaa aragtida ah "tayada ugu horreysa, adeeg bixiyaha marka hore, horumar joogto ah iyo hal-abuurnimo si aan ula kulano macaamiisha" oo leh maareynta iyo "cillad eber, cabashooyin eber" sida ujeeddada caadiga ah Tilmaantaadu waa awoodeena koronto weligeed ah! Si diirran ugu soo dhawow macaamiisha gurigaaga iyo dibaddaba inaad u tagto ururkeenna. Waxaan sii wadi doonnaa inaan nafteena u hurno suuqa & horumarinta wax soosaarka isla markaana aan u dhisno adeeg wanaagsan oo isku xidhan macaamiishayada si aan ugu abuurno mustaqbal barwaaqo badan.
330ml 500ml 600ml galaas dhalo biir amber cagaaran oo faaruq ah
OEM 10 oz 330ml dhalada quraaradaha cad ee cad cad
Cadaadiska Saameynta: ≥0.7ips Cadaadiska hawada gudaha dhalada: ≥1.4MPa Farqiga heerkulka: ≥ 41 ℃ Run Culeyska Gudaha: ≤4grade OEM / ODM: Shahaadada La Aqbali Karo: 26863-1 WARBIXINTA TIJAABADA / ISO / SGS Hubinta Tayada: Baaritaanka iswada si loo hubiyo tayada Adeeg kale: Iskudhin duubo, daabacaadda sumadda, iwm
Matte dhalooyinka biirka galaaska madow oo leh dabool
Dhalada dhalada ah ee dhalada biir cad lagu shubay
Dhalada Khamriga Khamriga Dhalada Beer Dhalada dhalada ah iyo dhalada cabitaanka fudud ˴ dhalada wax lagu shubo jar Mason weel waa sheygayaga caanka ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbi kara imtixaanka FDA, LFGB iyo DGCCRF. Cagaar, ilaalinta deegaanka iyo nolol caafimaad leh oo aadamuhu had iyo jeer waxay ahaayeen jihada horumarkayaga. Kooxda qaabeynta xirfadeed waxay la kulmi karaan shuruudaha daabacaadda, xirxirida, nashqadeynta alaabta. Mabda'eenu waa: hal hawlgal saldhig, buuxinta baahidaada, bixinta xalal iyo gaaritaanka iskaashi guul-guul ah.
Jar Kaydinta Saliida Olive, Saliida Zeytuunka Iyo Khamriga Qamriga, Dhalo Saliid saytuun ah, Dhalo Saliid Cagaaran, Dhalada Saliida Saliidda ah ee 250ml, Dhalo Saliid saytuun ah,